Andranofotsy Maroantsetra: roahin’ny ben’ny Tanàna ny mponina | NewsMada
Andranofotsy Maroantsetra: roahin’ny ben’ny Tanàna ny mponina
Tsy afaka mampiasa ny tany ny tompony sy ny fokonolona any Andranofotsy Maroantsetra, vokatry ny fanakanana ataon’ny ben’ny Tanàna. Tratry ny fandrahonana koa ny olona mitady hampahafantatra ny zava-misy any amin’ny manam-pahefana.
Manao antso avo ny fikambanana Tany, hijerena akaiky ny zava-misy mihatra amin’ny mponina any amin’ny fokontany Amparihibe, kaominina Andranofotsy, distrika Maroantsetra, faritra Analanjirofo. Namoaka fanapahan-kevitra ny ben’ny Tanàna fa hesorina amin’ny fokonolona ny taniny, manodidina ny 138 ha, ahitana tanimbary, voly lavanila sy jirofo ary kafe, kijanan’omby ary fasana. Tsy mazava ny antony fa anisan’ny heno ny filazana fa misy olona avy any an-toeran-kafa kasaina hafindra eo amin’ity toerana ity.
Tsy nanaiky izany ny fokonolona ka nitory any amin’ny fitsarana ary nandresy nahazo rariny, taorian’ny didim-pitsarana nivoaka ny 14 aogositra farany teo. Na izany aza, tsy mbola milamina ny raharaha satria misy fitoriana hafa koa napetraky ny fokonolona any amin’ny fitsarana, mikasika hazo naniry nalain’ny olona eo amin’ilay velaran-tany voakasika.
Mifamahofaho ny raharaha any anivon’ny sampandraharahan’ny fananan-tany.
Misy mandrahona koa izay manam-pikasana hampahafantatra ny fandehan-javatra any amin’ny manam-pahefana. Mahatsiaro tena ho kely hery sady tsy misy mitsinjo ireo mponina sy ny fokonolona, sady any amin’ny ambanivolo sy mitoka-monina rahateo.
Manoloana ireo, mitaky ny hanaraha-maso ity tranga ity ny fikambanana Tany, miaro ny tany ho an’ny Malagasy, sy hanakanana ity fikasana haka ny tanin’ny fokonolona amin’ny fomba tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny ity.